October | 2017 | Radio Himilo
radio himilo October 31, 2017	Features, Wararka Leave a comment 52 Views
Muqdisho – Maalinta Magaalooyinka Caalamka waxaa 27 December sanadkii 2013-ku dhawaaqay Kal-fadhiga Guud. Taniyo markaas 31 October sanad kasta ayaa loo dabaal-degaa. Hal-ku-dhegga guud ee Maalinta Caalamiga ee Magaalooyinka waa magaalo fiican iyo nolol hagaagsan, waxaana looga golleeyahay in lagu ...
radio himilo October 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 42 Views
Muqdisho – Tababaraha kooxda Man Utd, Jose Mourinho ayaa qiray in uu ka walwalsanyahay heshiiska laacibkiisa qadka dhexe ee Marouane Fellaini kaas oo kamid ah xiddigaha uu sida gaarga ah u ixtiraamo. Heshiiska Fellaini ayaa idlaanaya dhammaadka xili ciyaareedkan, kadib ...
Lionel Messi oo aan ku faraxsanayn go’aanka Valverde ku ciyaarsiiyay Gomes.
radio himilo October 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 55 Views
Muqdisho – Lionel Messi ayaan ku faraxsaneyn go’aankii Ernesto Valverde uu ku ciyaarsiiyey Andre Gomes kulankii Barcelona iyo Athletic Bilbao ee Sabtidii. Taasi waa sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka ah Don Balon kaas oo sheegay in xiddiga reer Argentine ...
Aston Villa, Leicester iyo West Brom oo xiisaynaya Carrick.
radio himilo October 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 51 Views
Muqdisho – Kooxaha Aston villa, Leicester iyo West Brom ayaa xiiseynaya heshiis ay ka helaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee Manchester United, Michael Carrick. Carrick ayaa u saxiixay hal sano oo heshiis ah Manchester United, wuxuuna sanadkan hal kulan u ciyaaray ...
radio himilo October 29, 2017	Features, Wararka Leave a comment 75 Views
Muqdisho – 47-jir ku nool degmada La Paz ee gobalka Agusan del Sur, dalka Filibiin waxaa dhulka uu cagaha soo dhigo ugu danbeysay sanadkii 2014-ka kahor inta uusan ku korin geed dheer oo gurigiisa ku agyaal. Taniyo markaas dhulka sooma booqan, ...
Guusha Man United ka gaartay Tottenham maxay kaga dhigan tahay?!
radio himilo October 29, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 46 Views
Muqdisho – Manchester United ayaa guul 1-0 ah ka gaartay Tottenham Hotspurs kulankii Isbuucaan ugu adkaa horyaalka England Premier League . Man United ayaa garoonkeeda ku adkaatay iyadoo markale shabaqa ilaashatay kana soo kabsatay guuldarradii Isbuucii lasoo dhaafay kasoo gaartay ...
radio himilo October 28, 2017	Features, Wararka Leave a comment 59 Views
Mexico – Bulsho tira-yar oo Muslimiinta ayaa ku koraya bulshada Maya ee Mexico halkaas oo ragu ay xiranayaan koofiyado: dumarkuna xijaab taas oo ku dhex milan dhaqanka bulshada Maya. “Dadku waxay nagu eegi jireen fiiro gurracan markii aan islaamnay, waxay ...
radio himilo October 28, 2017	Features, Wararka Leave a comment 73 Views
Muqdisho – Afar arday oo dhigata Jaamacadda Hefei ee bariga Shiinaha ayaa dhawaan caddeeyey in caleemaha geedaha ay ku filan yihiin dhar ahaan in loo xiran karo. Sawirada afarta arday oo ku labisan caleemaha ayaa ku baahay baraha bulshada ee dalka ...
radio himilo October 28, 2017	Features, Wararka Leave a comment 51 Views
Muqdisho – Nin ku nool dalka Shiinaha ayaa maareeyey cunista saxan cayayaan badan oo ka buuxo si uu ugu guuleysto dahab. Tartankan ayaana lagu qabtay magaalada Yunnan. Dad badan ayaa isku diiwaan-geliyay inay u tartamaan ku guuleysiga dahabka. Ka qeyb-galayaasha waxaa ...
radio himilo October 28, 2017	Features, Wararka Leave a comment 46 Views
Muqdisho – Haweeney da’ ah oo ku nool Texas ayaa la fajacsan ficil uu ku sameeyey madaxa Walmart kadib markii laga eryay booskii ay ku lahayd shirkadda. 84-jirta lagu magacaabo Frankie Ruffino oo degan Burton waxay u shaqeynaysay shirkadda Walmart muddo ...